Facebook ကျင့်ဝတ် - Myanmarload
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 16:23 July 06, 2017
ယနေ့ခေတ် လူမှုကွန်ယက်မှာ ခေတ်အစားဆုံးနဲ့ လူသုံးအများဆုံးက facebook ပါပဲ။ ဒီလို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာတာနဲ့ အမျှ facebook ကျင့်ဝတ်လည်း လေ့လာထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Facebook ကျင့်ဝတ် အနည်းငယ်ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၁) အစစ်အမှန် ဖြစ်ပါစေ။
နာမည်ရော၊ တင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံရော၊ ကိုယ့်အကြောင်းရော အမှန်အကန်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်နာမည် မသုံးချင်ရင် တခြား ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင််တဲ့ နာမည် တစ်ခုခု သုံးပါ။ ဓါတ်ပုံ မတင်ချင်ရင်လည်း သူများ ဓါတ်ပုံယူသုံးတာမျိုးကို ရှောင်ပါ။ About မှာ ကိုယ့်အကြောင်း မဟုတ်ဘဲ ရေးထားတာမျိုးကလည်း သင့် သူငယ်ချင််းတွေသာ သိသွားခဲ့ရင် သင့်ကို အယုံအကြည်မဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ရိုးသားခြင်းက အကောင်းဆုံးသော အလှတရားမို့ ရိုးသားစွာနဲ့ပဲ facebook သုံးကြရအောင်။
၂) အချိန်နဲ့ တပြေးညီ check-in မတင်ပါနဲ့။
Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ် သင့်ကို ချစ်တဲ့သူ ရှိသလို မုုန်းတဲဲ့သူလည်း ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲဲ့။ ဒီလို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ check-in တင််ခြင်းအားဖြင့် သင့်အတွက် လုံခြုံမှု နည်းပါတယ်။ ဝီရိယ ဟူသည် ပိုသည်မရှိဆိုသည့် စကားအတိုင်း မလိုအပ်ဘဲ အန္တရယ်ကို မဖိတ်ခေါ်ပါနဲ့။
၃) ရန်မဖြစ်ပါနဲ့။ ရိုင်းစိုင်းစွာ မပြောပါနဲ့။
တချို့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ Post တွေ၊ Status တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကျေနပ်လို့ ဒေါသထွက်လို့ ရန်မတွေ့ပါနဲ့။ လူတိုင်းက လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်တာမို့ သူူလည်း သူ့အမြင်နဲ့သူ၊ သူ့ အဆင့်နဲ့ သူ ရှိမှာပါ။ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်လာရင်လို့ စိတ်တိုပြီး သည်းမခံနိုင်ရင် Block (သို့မဟုတ်) unfriend လုပ်ပစ်လိုက်ပါ။ သူ့ကို public မှာ ရန်သွားတွေ့တာမျိုး၊ ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုတာမျိုးက ကုုိယ့်စာကို သူ မမြင်ခင် အရင်ဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ သိက္ခာကျပါတယ်။ သူမြင်ရင်လည်း အချင်းချင်း ပြန်ပြောရင်း စကားများနိုင်တာမို့ ဒီအချက်ကို ရှောင်ရှားတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
၄) အကောင်းမြင်တဲ့ comment မျိုးပဲ ပေးပါ။
ခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲ မကြိုက်ရင် ကျော်သွားပြီး လက်ခံလို့ရတဲ့ အနေအထားဆိုရင် အကောင်းမြင််စိတ်နဲ့ပဲ comment ပေးပါ။ ဝေဖန်တာမျိုး၊ လက်မခံတာမျိုးကို comment မှာ မရေးပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ comment လေး တစ်ကြောင်းကြောင့် တစ်ဖက်လူ စိတ်ကျေနပ်ရတယ်ဆိုရင် ဒါက ကောင်းတဲ့ အလုပ် တစ်ခုပါပဲ။
၅) တစ်ဖက်လူကို လေးစားပါ။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ့်ထက် ရာထူးငယ်လို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းဖြစ်လို့၊ ကိုယ့် တပည့်ဖြစ်နေလို့၊ အိမ်မှာ အငယ်ဆုံးမို့လို့၊ သူက ဆင်းရဲလို့ ….. စသည် စသည်ဖြင့် မလိုအပ်တဲ့ အတိုင်းအတာတွေနဲ့ နှိုင်းပြီး facebook မှာ တစ်ဖက်သားကို မလေးမစား ဆက်ဆံတာမျိုး မပြုလုပ်ပါနဲ့။ Facebook ရဲ့ အသုံးအနှုန်းက friend မို့ အားလုံးက သူငယ်ချင်းပါပဲ။ သူငယ်ချင်းလို ဆက်ဆံမှာ မလိုလားဘူး၊ အရိုအသေတန်တယ် လို့ ယူဆရင် အစကတည်းက friend အဖြစ် လက်မခံပါနဲ့။ မအပ်ပါနဲ့။ ဒါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
၆) မဆိုင်တာတွေကို Tag မတွဲပါနဲ့။
ဆယ်ကျော်သက် ကလေးတွေ တော်တော်များများ လုပ်ကြတဲ့ အရာကတော့ Tag တွဲတာပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘာလိုလို ညာလိုလို status တွေနဲ့ ကိုယ့်ဓါတ်ပုံတွေမှာ Tag တွဲလိုက်ခြင်းဖြင့် သူနဲ့ ပတ်သက်မှု တစ်ခုခု ရှိနိုင်တယ်လို့ ယူဆခံရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်လည်း ထိခိုက်သလို၊ တဖက်လူူ အတွက်လည်း ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေးသင့်ရေးထိုက်တယ် ထင်ရင် ရေးပါ။ တစ်ဖက်လူကိုတော့ Tag မတွဲပါနဲ့။
၇) ကို််ယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက်ချက်ထားပါ။
သူများကိုလည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်း မမေးပါနဲ့။ ကိုယ်လည်း မလိုအပ်ဘဲ public နဲ့ မရှင်းပြပါနဲ့။ လူတိုင််းမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှိ့ဝှက်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ Password ကိုလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြပါနဲ့။ ဒါက သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တစ်ခုပါပဲ။
၈) ဖြစ်နိုင်ရင် RS ကို ရှောင်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook သုံးသူတွေအနေနဲ့က RS ဆိုတာကို ချစ်သူ/ရည်းစားရှိကြောင်း ဖော်ပြမှု တစ်ခုသာ ဖြစ်ပေမဲ့ တခြား နိုင်ငံတွေမှာတော့ အဓိပ္ပါယ် မတူပါဘူး။ ယဉ်ကျေးမှု မတူသလို အယူအဆလည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ ချစ်သူနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့ RS ထပ်ပြင်ရတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ကိုယ့်ကို ပတ်ဝန်းကျင်က တစ်မျိုး မြင်နိုင်ပါတယ်။
၉) လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကျေနပ်ချက်တွေ မရေးပါနဲ့။
ဒါကတော့ Business Ethics နဲ့ အနည်းငယ် သက်ဆိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် မကောင်းကြောင်း၊ Boss မကောင်းကြောင်း … စသည်ဖြင့် ရေးလိုက်ခြင်းက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်က သိသွားခဲ့ရင်လည်း အခြေအနေတွေ တင်းမာနိုင်ပါတယ်။
၁၀) သူငယ်ချင်းအဖြစ် လက်ခံမယ်ဆို အနည်းငယ်မျှ လေ့လာပါ။
Facebook မှာ Account အတုတွေ များလွန်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူငယ်ချင်းအဖြစ် လက်ခံတော့မယ်ဆို Mutual Friends ရှိလား? သူ Profile ထဲ ဝင်ကြည့် ? သူ ဘယ်လို Page တွေ like/ follow လုပ်ထားလဲ ? … စသည်ဖြင့် အနည်းငယ်မျှ လေ့လာဖိိုု့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်က အပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါလေးတွေကိုတော့ လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ Friend ဖြစ်ပြီးမှ Block/ Unfriend လုပ်ရတာထက် အစကတည်းက friend မဖြစ်တာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီအချက်လေးတွေကိုသာ သိထားမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ရင့်ကျက်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ Facebook အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ နေရာတိုင်းမှာ ကျင့်ဝတ်ရှိတာမို့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေသာ သိထားမယ်ဆို သင့်အတွက် အကျုံးဝင်မှာပါ။ အားလုံးပဲ Facebook ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေ ။